Meteorolojia amin'ny Internet dia tranonkala iray manokana amin'ny fanaparitahana ny toetr'andro, ny klimatolojia ary ny siansa mifandraika amin'izany toa ny Geology na Astronomia. Izahay dia manaparitaka fampahalalana henjana momba ireo lohahevitra sy fotokevitra tena manan-danja indrindra eo amin'ny tontolon'ny siansa ary mitazona anao hatrany hatrany amin'ireo vaovao lehibe indrindra izahay.
Ny ekipa fanontana ao amin'ny Meteorología en Red dia misy vondrona iray manam-pahaizana amin'ny siansa momba ny toetr'andro, toetrandro ary tontolo iainana. Raha te ho anisan'ny ekipa koa ianao dia afaka andefaso aminay ity takelaka ity mba ho tonga mpanonta.
Nahazo diplaoma tamin'ny siansa momba ny tontolo iainana sy ny mari-pahaizana momba ny fanabeazana momba ny tontolo iainana avy amin'ny Oniversiten'i Malaga. Nianatra momba ny toetr'andro sy ny toetrandro tamin'ny hazakazaka aho ary liana amin'ny rahona foana aho. Amin'ity bilaogy ity aho dia manandrana mampita ny fahalalana ilaina rehetra hahalalako bebe kokoa ny planeta sy ny fiasan'ny atmosfera. Namaky boky maro momba ny toetr'andro sy ny dinamika avy amin'ny atmosfera aho nanandrana naka an'ity fahalalana ity tamin'ny fomba mazava sy tsotra ary nampiala voly.
Geology aho, Master amin'ny Geofisika sy ny toetr'andro, fa ambonin'izany rehetra izany dia mazoto amin'ny siansa aho. Mpamaky tsy tapaka ny diary siantifika misokatra toy ny siansa na ny natiora. Nanao tetik'asa momba ny seismolojia Volkanika aho ary nandray anjara tamin'ny fampiharana ny tombana ny tontolo iainana tany Polonina tany Sudetenland sy Belzika tao amin'ny Ranomasina Avaratra, fa mihoatra ny mety ho fananganana azy, volkano sy horohoron-tany no tiako. Tsy misy zavatra toy ny loza voajanahary mampahiratra ny masoko ary mitazona ny solosainako mandritra ny ora maro hampahafantatra ahy izany. Ny siansa no asako sy tiako, indrisy fa tsy ny asako.
Nihalehibe tany an-tsaha aho, nianatra tamin'ny zavatra rehetra nanodidina ahy, namorona symbiosis voajanahary teo anelanelan'ny traikefa sy ny fifandraisana amin'ny natiora. Rehefa nandeha ny taona dia tsy afaka ny tsy hahagaga ahy ilay fifandraisana izay entintsika rehetra ao anatintsika mankany amin'ny tontolo voajanahary.
Antonio no anarako, manana mari-pahaizana momba ny haitao aho, Mpampianatra momba ny injeniera sivily ampiharina amin'ny Asam-panjakana ary Master amin'ny Geofisika sy ny toetr'andro. Niasa amin'ny maha-geolojika an-tsaha ahy aho ary mpanoratra ny tatitra momba ny jeografia. Izaho koa dia nanadihady momba ny mikrometeorolojika mba handinihana ny fihetsika amin'ny atmosfera sy ny ambanin'ny tany CO2. Manantena aho fa afaka manome ny fasako hahalasa fifehezana mahaliana toy ny meteorolojia mba ho azon'ny rehetra jerena.